Ungayifumana njani incoko kaWhatsApp? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 7, 2021 0 IiCententarios 279
Ngaphandle kwemigaqo-nkqubo esandula ukumiliselwa nguWhatsApp, isesona sicelo sithandwayo sithunyelweyo nesithandwayo ukuza kuthi ga ngoku. Kwaye kukuba ngalo lonke ixesha singakulindelanga, kuphuma nohlaziyo olutsha apho faka into entsha kubasebenzisi.
Iinkcukacha ngokubhekisele kwi ukubuyela kwincoko ezicinyiweyo, I-WhatsApp isasinika amathuba afanayo kwiminyaka eyadlulayo. Ngapha koko, zombini i-Facebook, i-Instagram kunye nezinye, azinawo umsebenzi okanye ukhetho olusivumela ukuba siphinde sixoxe nomntu othile.
Kodwa into esinokuyenza kukufumana olo lwazi ngeendlela eziqhelekileyo. Ukuba unomdla wokwazi ukuba ungayenza njani, apha sikubonisa yonke into oyifunayo ukuze ukwazi phinda ubuye kube kanye kuzo zonke ezo ngxoxo oyicime ngengozi okanye nangaso nasiphi na esinye isizathu.
Zeziphi iindlela onokukhetha kuzo xa ubuyisa izingxoxo zikaWhatsApp?
Njengoko besitshilo kumzuzwana odlulileyo, okwangoku awunamsebenzi okanye ukhetho olukuvumela yenze isebenze kwaye ubuyise incoko oyicimileyo. Kodwa unayo unayo iikopi zokugcina.
Yikholwe okanye hayi, ukwenza ukhuseleko kugcina kuthetha ukuba unezibonelelo ezininzi kumsebenzisi. Awuyi kufumana kuphela izibonelelo xa uyisebenzisa ngeWhatsApp, kodwa nangayo nayiphi na enye ingcaciso oyigcinileyo kwiselfowuni yakho, kunye nolwazi lwezicelo ezifakiweyo.
Ngoku, nangona i-backups inenjongo enye, ayizizo zonke ezisebenza ngendlela efanayo. Siyakugxininisa oku, kuba kuxhomekeke kwinto ofuna ukuyenza ngolwazi, enye yogcino iya kusebenza ngakumbi kunenye.
Izipele ezenziwe ngeWhatsApp
Olu lolona yogcino lunokwenzeka ukuba uneselfowuni efanayo njengoko ithathwa njengogcino lwasekhaya. Oku kunezibonelelo zako, kuba unako qwalasela usetyenziso ukuze ikhusele yonke into rhoqo.
Kwimeko apho ungumntu okhathalela kakhulu i ulwazi kunye nokusebenza nedatha kuWhatsApp, eyona nto unokuyenza kukuya kuseto kwaye ukhethe ukwenza ukhuphelo yonke imihla.
Izipele ezenziwe ngeakhawunti zikaGoogle
Ngokusisiseko unokwenza ikopi yogcino kuWhatsApp kwaye uyigcine kwiselfowuni yakho, uyigcina kwilifu leakhawunti yakho kaGoogle. Icala elisezantsi kukuba inkqubo yogcino ithatha ixesha elide kuba ayigcini ngokugcina yonke idatha yakho ye-WhatsApp, uyayigcina. ukwenza nazo zonke iinkqubo zenkqubo, kunye nolwazi olugcinwe kunye noqwalaselo olwenzileyo.
Kwelinye icala, unethuba lokuba ukhuphele le kopi yogcino kuso nasiphi na iselfowuni onaso Iakhawunti yeGmail enxulumene neselfowuni. Kwiimeko ezininzi kubonakala njengokuqwalaselwa kweselfowuni edlulileyo kunokukhutshelwa kwiselfowuni entsha ehambelanayo.
1 Zeziphi iindlela onokukhetha kuzo xa ubuyisa izingxoxo zikaWhatsApp?
1.1 Izipele ezenziwe ngeWhatsApp
1.2 Izipele ezenziwe ngeakhawunti zikaGoogle
Ungayifumana njani incoko ye-WhatsApp esusiweyo?